Sezibalo ibalwa intengo bitcoin ngoba 2018 - Blockchain Izindaba
Sezibalo ibalwa intengo bitcoin ngoba 2018
Inani Bitcoin ngoba 2018
Ngo-January 22, umsebenzisi okulingene Joel Lopez Barata ishicilele iposi: “Ngacabanga intengo bitcoin unyaka wonke 2018. Ngeke ukholwe umphumela! “Nge nesitatimende” lena nje umbono, hhayi komkhandlu utshalomali. ” izibalo Lopez-IiMbalo zisekelwe umbono wokuthi ukuziphatha bitcoin esikhathini esizayo kumelwe ilingane ukuziphatha kwakhe esikhathini esidlule. Esimweni esinjalo, Lopez uyazicabangela bitcoin “imali enempilo”, futhi Fiat – kungekho: “I inzuzo esizayo kuyoba ilingane zokugcina, kuyilapho abantu abaningi ukuqonda ukuthi bitcoin iyona imali engcono.”
I Lopez sekulingisa kusekelwe Monte Carlo indlela. Lena anhlobonhlobo algorithm yezamakhompyutha ancike amasampula okungahleliwe okuphindaphindiwe. Esimweni esinjalo, Lopez isebenzisa nsuku zonke dollar inzuzo bitcoin ukuqonda ukuthi yini amanani cishe kuyoba ekupheleni 2018.
Ukubala inzuzo nsuku zonke, uhlukanisa laba zamanje bitcoin intengo ngentengo ngosuku lokugcina futhi ususa iyunithi: “Akhuluma ngokuzokwenzeka Monte Carlo sekulingisa in ezezimali, sicabanga ukuthi intengo ukuziphatha esizayo lwefa uyofana ngokuziphatha kwayo esidlule, bese udala eziningi izinguqulo okungahleliwe yaleli kusasa , izibalo yaziwa ngokuthi “izizinda okungahleliwe”. Ikhodi umnyuziki ngokudala sekulingisa enjalo itholakala ku GitHub.
Ukwakha ngamunye ukuhamba imodeli okungahleliwe kule sekulingisa, eyodwa kumele bathathe amasampula ongacabangi inzuzo nsuku zonke kusukela 2010 namuhla, engeza bese wande cumulatively uDisemba 31, 2018. Ngemva kwalokho, amanani wamanje bitcoin iyanda yi ukubaluleka uhamba ibanga okungahleliwe, futhi umphumela sekulingisa yentengo esizayo. Lokhu kumele kwenziwe izikhathi eziningi (esimweni esinjalo – 100,000 izikhathi), futhi ekupheleni konyaka sizobona inani lokugcina ukusatshalaliswa ngayinye ukuhamba okungahleliwe.
Okokuqala 200 ka 100,000 izizinda okungahleliwe ibukeke ngale:
It kuvela ukuthi intengo lokugcina okungahleliwe kakhulu uhamba amabanga kusuka $ 10,000 ukuze $ 100,000. Lo mdwebo olandelayo ubonisa ukusatshalaliswa kwazo amanani lokugcina zonke 100,000 izizinda okungahleliwe:
Kubonisa ukuthi intengo cishe uyahluka $ 24,000 futhi $ 90,000. Ukuze uqonde ke ngokunembile, kukhona izindlela ezimbalwa. Okokuqala, ungavele ukubala 50% -iphesenti th of ukusatshalaliswa amanani lokugcina. Kuzoba elilingana $ 58,843. Enye indlela iwukuba ukubala umsebenzi okungenzeka kwabantu besebenzisa zenuzi ukuminyana ukulinganisela futhi uthole intengo elihambisana esiphezulu sale umsebenzi – $ 55,530.
Kodwa lokhu akulona uphawu lokuthi lokugcina, kusenzima kangcono ukuyisebenzisa ukuthola isikhawu ukuzethemba. Ngoba intengo bitcoin, le 80% ukuzethemba isikhawu kuyoba $ 13,200 – $ 271,277. Wabuye uveza ukuthi amathuba wokuthi ngaphambi kokuphela konyaka intengo kuyoba ngezansi $ 13,200 ziyefana amathuba ukuthi kuyoba ngenhla $ 271,277.
Manje ukuthi zenuzi ukuminyana ukulinganisela waziwa, kungenzeka ukubala okungenzeka ukuthi izindleko bitcoin uyowa ekupheleni isihlobo ngonyaka inkomba ethile. Ngokuqondene, ematfuba ukuthi intengo kuyoba aphansi noma ilingane ezingeni Januwari 20 ($ 12,000), kuyinto 9.84%.
Slovenia kudala lesikhumbuzo Bitcoin
Kranj, a Slovenian c ...
Thumela Previous:Kuvele ukuhlaselwa kuhlonyiwe obenziwe kwi-Canadian Crypto Exchange
Thumela Landelayo:Blockchain Izindaba 26 Januwari 2018